Axmed Madoobe: Doorasho kuma dhacayso sidaan 'Afduubka ah' | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Madoobe: Doorasho kuma dhacayso sidaan ‘Afduubka ah’
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam 'Axmed Madoobe' ayaa sharuud ku xiray in ay dhacdo doorasho.
KISMAAYO, Soomaaliya - Axmed Madoobe oo Warbaahinta la hadlay maanta ayaa Dowladda Federaalka ku eedeeyay in aysan dhiirigalin heshiisyadii doorasho ee lagu gaaray Muqdisho.
Asigoo dowladda Farmaajo ku eedeynaya in ay afduubatay doorashada 2020/21 ayuu yiri: "Doorasho kuma dhacayso sida maanta ay wax yihiin iyo nooca Afduubka ah".
Madoobe oo ka hadlaya arinta gobolka Gedo ayuu sheegay in Dowladda Federaalka ay ka baxday heshiiskii uu la galay: ''Dowlad Gobolleed walba labo magaalo ayaa loo asteeyay in ay doorashadu ka dhacdo, maanta gobolka Gedo gacanteena ma ku jirtaa, dowladda ayaa ka sameysay ciidamo iyo jabhado'' ayuu yiri Axmed Madoobe.
Heshiiska Dowladda Farmaajo iyo Maamulka Jubbaland ayaa xeerinaya in doorashada ay ka dhacdo labo magaalo. Doorashada Jubbaland ayaa ka dhici laheyd Kismaayo iyo Garbahaarey, laakiin Garbahaarey oo ka tirsan gobolka Gedo waxey haatan ku jirtaa gacanta Dowladda Federaalka.
Xiisadda amni iyo mid siyaasadeed ayuu Farmaajo ka abuuray gobolka Gedo, taasoo ka dhalatay cawaaqib xun oo shacabka ka dhaxleen, waxaana saameyn ku yeelatay hanaanka Federaalka Soomaaliya.
Maamul cusub oo Farmaajo la shaqeeya ayaa laga dhisay Gedo, kaasoo ay ilaalinayaan Ciidan uu Turkiga uu ku tababaray magaaladda Muqdisho oo lagu magacaabo "Haramcad", iyadoo uu meesha ka baxay Maamulkii Axmed Madoobe soo magacaabay.